Ahoana no hamintinanao ny taona 2020 ary hanaiky ny 2021? - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Ahoana no hamintinanao ny taona 2020 ary hanaiky ny 2021?
Fotoana: 2021-01-07 Hits:
Betsaka ny fomba fiarahabana ny taona vaovao. Ny hetsika hazakazaka lavitra ezaka nokarakarain'i Jwell dia mety ho hetsika iray manokana.
Tamin'ny 8:00 tamin'ny 1 Janoary 2021, nilahatra milamina tsara teo amin'ny kianja ireo mpiasa avy amin'ny orinasa maro an'ny Jwell Company. Ny olona Jwell miakanjo akanjo "China Red" sy "Vitality Blue" dia nitondra fikitihana loko mamirapiratra tao amin'ny ozinina ririnina. Androany, ny mari-pana isaky ny faritry ny orinasa dia mihena 5 ℃. Raha mbola mankafy ny hafanan'ny fandriana ny ankamaroan'ny olona, ​​ny olona Jwell dia manomboka ny taona vaovao amin'ny fomba miavaka.
Ny hazakazaka lavitra ezaka amin'ny alàlan'ny taona vaovao, toy ny hetsika fanatanjahan-tena nentim-paharazana tian'ireo mpiasan'ny Jwell Company, dia notontosaina am-pahombiazana nandritra ny andiany 15 hatreto. Manana fitaomana isan-karazany izy io ary nanjary hetsika marika an'ny kolontsain'ny orinasa Jwell Company hametra-pialana amin'ny taloha sy handray ny vaovao.
Mandrosoa amin'ny taona vaovao ary sokafy ny ho avy!
Mitaingina ny fironana ary manomboka dia vaovao!
"Fanatanjahan-tena amin'ny hazakazaka lavitra ezaka, mihazakazaka matetika hitazomana ny fo salama." Ny hazakazaka lavitra ezaka 15 taona amin'ny Andron'ny Taom-baovao dia nanatri-maso ny fitomboan'ny olona Jwell. Ny maha-zava-dehibe ny fihazakazahana lavitra amin'ny Andron'ny Taom-baovao dia efa nihoatra lavitra noho io asa io ihany. Tsy manantena fotsiny isika fa ny rehetra hamadika ny hazakazaka lavitra ezaka ho lasa "hazakazaka mahazatra", fa koa hifantoka amin'ny fanatanjahan-tena tsy tapaka, miaraka amin'ny vatana salama ary angovo be dia be. Amin'ny asa sy fiainana ho avy dia maneho tanteraka koa ny fanahin'ny olona ambony sy be herim-po i Jwell.
Isan-taona, miarahaba ny taona vaovao isika amin'ny fihazakazahana; isan-taona, mamorona famirapiratana amin'ny hazakazaka izahay. Tamin'ny andro voalohany tamin'ny 2021, dia nihazakazaka nanatratra ny Taom-baovao indray izahay ary nanatrika ary niarahaba ny hazavana voalohany tamin'ny taona vaovao tamin'ny fihazakazahana. Nihalehibe jiro mare izahay. Nandroso izahay ary nanararaotra ny fotoana. Tsy nanana lamaody intsony izahay, ary ho avy koa. Vokatra tsara isan'andro!
Tontolo iainana vaovao, volavolan-drafitra misokatra, fitiavam-boninkazo, tsy mety resy!
Mandehana hatrany ary mihazakazaka amin'ny vanim-potoana volamena vaovao!
Tsy misy ririnina tsy azo resena, ary tsy misy lohataona tonga. Ao amin'ny 2021, Jwell Masinina koa dia hampiditra ny fotoana volamena amin'ny fampandrosoana. Manoloana ny fifaninanana eo amin'ny tsena sy ny indostrian'ny indostria, ny olona Jwell dia hanohy hifikitra amin'ny fanahin'ny "fikirizana sy ny fanavaozana", hiara-hiasa sy hiara-hiasa hahatratra ilay tanjona iray ihany, hanohy hatrany ny fihazakazahana ary hihazakazaka amin'ny vanim-potoana volamena vaovao!
Hanohy hiaraka amin'ny taona 2021 izahay, ary hijanona ho fikirizana sy hafanam-po amin'ity orinasa ity. Andao hanavao sy hiara-miainga isika ary hahita fahagagana vaovao!
HIVERINAFotoana voan'ny areti-mandringana, Jwell mandeha amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa manerantany
NEXTMba hanohanana ny "Anti-epidemiem" eran-tany, dia natombok'i CHINA JWELL mafy ny tsipika famokarana lamba vita amin'ny lamba tsy tenona an'ny PP Melt-blown